Ihe i nwere na-Maara Banyere VLC maka iPhone
iPhone, otu n'ime ole na ole media Player ị pụrụ ịtụkwasị obi bụ VLC. VLC mepụtara ya aha site na àjà keukwu media nkwado maka iche iche nke usoro na-enye ndị ọzọ ọrụ karịa ihe ọ bụla ọzọ media ọkpụkpọ na-enye nwere ike. Ọ bụrụ na ị na-achọ iji VLC na anyị na iPhone ebe a bụ ihe ole na ole mkpa ka ị mara banyere VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ.
Nkebi nke 1: Olee otú Download na Wụnye VLC on iPhone
Part 2: Olee ịgbakwunye videos ka VLC media ọkpụkpọ na iPhone
Part 3: Gịnị ma ọ bụrụ VLC pụrụ imeghe Video Files
Nkebi nke 1: Olee otú Download na Wụnye VLC on iPhone?
Ọfọn, iPhone ịbụ a smartphone, e nwere nnọọ mfe ụzọ mgbe ahụ i nwere na desktọọpụ. The ngwa ahịa bụ ebe kacha mma ibudata ị VLC ọkpụkpọ ibudata na ịwụnye na gị iPhone. Ebe a na-nzọụkwụ ibudata VLC na gị iPhone:
Dị nnọọ emeghe ngwa ahịa na gị iPhone. Otú ọ dị, jide n'aka na ị na-eji Wi-Fi ka ịnweta internet n'ihi na mma download ọsọ.
Ugbu a chọọ VLC na mgbe ahụ enweta na VLC.
Ugbu a dị nnọọ enweta na wụnye.
Gị download ga-amalite na-akpaghị aka na ekwentị, ọ ga-arụnyere. Ị nwere ike ịchọta VLC na gị ngwa ndepụta.
Part 2: Olee ịgbakwunye videos ka VLC media ọkpụkpọ na iPhone?
The ọzọ ajụjụ mgbe wụnye video ọkpụkpọ bụ otú tinye videos ọhụrụ gị VLC ngwa mere na ị pụrụ amalite gị na-anọkọ mmasị videos. Ọ bụ ezie na VLC na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ ọtụtụ ndị vidiyo na ekwentị gị, mgbe ụfọdụ, ọ bụghị ihe niile na-ahụrụ. N'ihi ya, ebe a bụ ndị nduzi na-eso maka agbakwunye videos ka VLC:
Mbụ, jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na nwere emelitere iTunes na iji eriri USB.
Ẹkedori iTunes na-aga ngwaọrụ gị. Ị ga-ahụ ihe niile na ngwa.
Ị mkpa gbadaa na na ala faịlụ nkekọrịta wee pịa on VLC. On ọzọ, pịa Tinye.
Ugbu a, dị nnọọ họrọ faịlụ na ị chọrọ gbakwunye VLC
Ozugbo usoro na dechara ị ga-ahụ videos na gị iPhone iji VLC. I nwekwara ike iji ndị ọzọ nhọrọ, nke bụ bulite faịlụ site na Wi-Fi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e nweghị Wi-Fi n'elu usoro bụ n'ụzọ zuru okè mma.
Nkebi nke 3: Gịnị ma ọ bụrụ VLC pụrụ imeghe Video Files?
Ọ bụ ezie na VLC zuru ezu mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka ọ nwere ike igwu ọ bụla usoro ma nọgide na-emelite onwe ya na ọhụrụ codecs ma ọ nwere ike ime ka ụfọdụ videos na-adịghị akwado. Mere, gịnị ka ị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-ahụ na VLC apụghị-egwu video faịlụ ị na-agbalị na-ele na-egwu? Ọfọn, yYou nwere ike iji a ọzọ software dị ka Wondershare Video Convertor Ultimate iji tọghata videos n'ime akwado Ị. The Video Convertor na-eme ka converting media formats ezigbo mfe. Ebe a bụ ihe na Wondershare Video Ntụgharị - Ọ bụrụ na gị VLC ọkpụkpọ apụghị-egwu ya, Wondershare pụrụ inyere gị aka, oge ọ bụla, onye ọ bụla oge. Nke a software bụ mfe aka ma na-akwado kasị formats dị rue ụbọchị.
Otú nyefee Music si iPad ka iPhone Mfe
> Resource> iPhone> Ihe Ndị Ị Maara Banyere VLC maka iPhone